FX uru n'elu Ebuka na Futures - Best Forex Who Am si | Ọkachamara advisors | FX ígwè ọrụ na-
HomeForex SchoolFX uru n'elu Ebuka na Futures
& Mmiri ara ehi Kasị ibu na nke kasị mmiri mmiri ahịa na ụwa Liquidity na-adabere n'ụkpụrụ ngwaahịa ụbọchị niile Liquidity dabere na ọnwa nke ahịa nkwekọrịta
egbu Speed Obere ezumike & mehie iwu Obere liquidity, ọzọ ụlọ maka slippage na njehie Obere liquidity, ọzọ ụlọ maka slippage na njehie
Awa Operation 24-hour trading edinam maka 5.5 ụbọchị n'izu -Erughị 7 awa trading oge kwa ụbọchị -Erughị 7 awa trading oge kwa ụbọchị
akwụ ụgwọ Nwere ike ịbụ ala mgbasa na ọ dịghị ọrụ on ọtụtụ ụzọ abụọ si $ 3 (maka electronic) na $ 10-30 (niile ndị ọzọ) site na $ 5 (maka kọmputa) gaa na $ 15- $ 50 (niile ndị ọzọ)
Ogologo / Short
mgbanwe Nwere ike irite uru ma na ma ehi ma na-agba ahịa Ọtụtụ ndị mmadụ na-azụta ebuka kama mkpụmkpụ-ere Agbasaghị nwere akp bearish oge
mgbochi Nwere ike mkpụmkpụ-ere n'oge ọ bụla Mmachi na ụfọdụ ndị na-azụ ahịa & ebuka Trading nanị site ịgba ọtọ / ala na-achị
leverage Na US, 50: 1; n'ebe ndị ọzọ si 50: 1 ka dị elu dị ka 1000: 1 ruo 2: 1 leverage ruo 30: 1 leverage
chọrọ Obere min mepere & oke, n'ozuzu: $ 50 maka micro na $ 500 maka obere mini Mkpa> $ 500 maka ego akaụntụ; > $ 2000 maka oke ndekọ Open> $ 4000
Mgbanwe nke Position Sizing Ọnọdụ dị mfe: 0.01 (10 cents / pip) na 0.1 ($ 1 / pip) na 1 ($ 10 / pip) emeghị mgbanwe ọnọdụ sizing: 100 + mbak, ba uba site na ngwaahịa uru ọnọdụ agaghị agbanwe agbanwe: 1 nkwekọrịta = azụtara azụmaahịa ma ọ bụ nwee ike ịfe oke
Ka anyị leba anya n'elu uru na a bit ọzọ na zuru ezu.
Nnukwu nha & uru nke oke
The Forex ahịa nwere ihe karịrị nke ọma karịa ndị ọzọ ahịa na okwu nke liquidity: na ihe e mere atụmatụ kwa ụbọchị ahia olu nke n'elu 4 enweta puku ijeri dollar, ọ bụ ihe 100 karịa ihe niile na ngwaahịa-mgbanwe jikọtara. E nwere atọ isi uru edunye site buru ibu otú ahụ liquidity:
Trade si gbuo ndị na-ozugbo;
Price n'aka na-enwetara na nnọọ nta slippage;
Ọ dịghị onye kwadoro nwere ike ịchịkwa ma ọ bụ ịkpali ahịa.
N'ihi na nke oke liquidity na internet dabeere na usoro ụzọ (adịghị mgbanwe, ọ dịghị open-mkpu ákwá olulu, ọ dịghị n'ala Broka), ngwa ngwa iji egbu ma nzi rijuru afọ nkwenye na-eme. Unu nwere ike iji na-enweta ụfọdụ slippage ma ọ bụrụ na ị ahia n'oge ozi ọma ọkwa ma ọ bụ ọ bụrụ na ị ahia a nnukwu ibu, ma na-emekarị na ị nwere ike igbu niile ahịa on your ore n'elu ikpo okwu dị ka ha na-egosipụta. Kasị Broka inye ozugbo ahia executions site ezigbo oge ruturu. Ụfọdụ n'ime ndị ọzọ na-ewu ewu ebuka na futures kwaga electronic nyiwe na mgbanwe, nke nnọọ onye ukwu nke aka ha egbu ọsọ, ma ha ka bụ ndị na-adịghị ike na-enweghị atụ nke fluctuations nke liquidity nile ha trading ụbọchị na slippage na ele mmadụ anya n'ihu jupụtara n'ime ndị nkịtị.
Ke ebuka na futures, e nwere ohere nke ibu sonyere na-abata n'ụlọ ma ọ bụ n'itinyekwu pụọ, na-eme ahịa na-ọgọ ma ọ bụ okuku. A na-adịbeghị anya atụ nke nnukwu sonyere n'itinyekwu n'ebe ngwaahịa ahịa bụ "flash okuku" nke Thursday, May 6, 2010, ebe High-Frequency (HF) ahịa steepụ pụọ na liquidity okụrede. The okuku kere a nkeji ole na ole, na Dow Jones ada ada 1000 ihe (nnukwu otu ụbọchị mgbe iju ke DJ akụkọ ihe mere eme) tupu bouncing azụ mgbe e mesịrị nke ehihie. A na-adịbeghị anya atụ nke nnukwu sonyere na-abata n'ụlọ ka futures ahịa iji na-aghọgbu ya egwu elu bụ 2008 "nri afụ": Goldman Sachs (na Commodity Index ọhụrụ maka ịzụlite na leveraging ada ego) bụkwanụ ndị bụ ezigbo ọkọnọ na ina nke wheat na narị ọtụtụ ijeri ọhụrụ dollar, na-eke a mebere "ina ujo" mgbe e nwere ọtụtụ ọkọnọ (2008 bụ a bompa owuwe ihe ubi n'ihi na wheat), nke chupuru price nke ọka wit na ndị ọzọ nri ghọọ ngwá ahịa 80% na-enwetụbeghị ụdị etoju, na-eme Goldman na a ole na ole ama ọgaranya investors baa ọgaranya ahụ n'akpa ata ụwa ụkpụrụ nke nri a na-eme hyper-oké ọnụ maka ndị dara ogbenye n'ụwa, sparking nri riots ke ihe karịrị iri atọ mba na-amụba n'ohu ahụ agụụ na-agụ site 250 nde na otu afọ (The Food afụ).
N'ihi na nke nnukwu liquidity nke Forex, ọ dịghị agabiga mbara igwe nke nwere dollar size ịkwaga ahịa ma elu ma ọ bụ ala, na price mkpachapụ bụ kama na-abụghị existent. Otú ọ dị, jikọtara omume nwere ike ime nke ọtụtụ n'ime isi sonyere, dị ka Central anoghi n'ulo oba, amanye ndị ahịa na a ụfọdụ direction, ma nke a bụ isịneke ka ụkpụrụ. Na ụwa nke ebuka, e nwere ọtụtụ ugboro mgbe nnukwu sonyere eme ihe egwu nwere ike ahia elu ma ọ bụ ala a ahịa na-agaziri ha, na e nwere ndị ọzọ mgbe sonyere nwere ike ime ihe iwu na-akwadoghị ma ọ bụ amorally ike ịgbanwe ihe ụfọdụ ebuka: akpụ ọdọ mmiri, Afọ agbarụwo trades, -eke rumo na-agba, ramping ahịa, ịsa trades na-akpụ bear raids.
Uru Ntanye 24-Oge Awa
Na Forex, e nwere ohere ahia gburugburu elekere, 24 awa ụbọchị ma e wezụga ná ngwụsị izu ie erekwa si 20: 15 GMT on Sunday ruo mgbe 22: 00 GMT Friday. Nke a 24-hour trading kwere omume n'ihi na ahịa gburugburu ụwa na-emeghe ma na-emechi n'oge dị iche iche:
Open Tokyo 7: 00 PM 0: 00
Tokyo Nso 4: 00 AM 9: 00
London nso 12: 00 PM 17: 00
Open New York 8: 00 AM 13: 00
New York nso 5: 00 PM 22: 00
Na ike na-ahia n'oge Asian, US, na European nnọkọ awa, ị nwere ike hazie gị trading oge. Ị nwere ike na-arụ ọrụ a obere ma ọ bụ a otutu, ahia na ụbọchị ma ọ bụ n'abalị, ma bulie oge na bụ ihe ọma na ihe ị ma ọ bụ gị atụmatụ.
N'ikwu ya n'ozuzu, n'ọtọsi na futures ahịa bụ tradable na kpọmkwem awa nke ụbọchị, na-emekarị n'oge arụ ọrụ ọtụtụ awa nke ndị mgbanwe dị na NYC (9-5 Est) ma ọ bụ Chicago (8-4 CST), onye nke ọ bụla na-adịgide adịgide na-erughị 7 awa. -Abụghị nke ndị a awa, na-akpọ tupu ma ọ bụ mgbe-ahịa awa, otu nwere ike ka na-enwe ike ahia na ụfọdụ electronic mgbanwe, ma olu na liquidity ka n'ụzọ dị ịrịba ama tapered anya, na-eme trading ohere ọzọ ize ndụ n'ihi ụba slippage. N'ihi na ọ bụ na akwụkwọ a obere mma n'oge mgbanwe ọrụ, ọ na-ahụ ọtụtụ ndị gwara ahia n'oge na-arụ ọrụ ọtụtụ awa nke New York (maka US ebuka) ma ọ bụ Chicago (n'ihi na Futures). Tụkwasị na nke a mgbochi, ahịa ga-emeso na nsogbu nke price gaps na-ewere ọnọdụ n'ihi na nke ugboro ugboro mmechi na oghere nke ha ahịa na ntarama dị iche (ma ọ bụ ọdịiche) na ahịa n'etiti ezi ndị na-emeghe, karịsịa n'oge n'otu ntabi anya ozi ọma ọkwa: ka ihe atụ, ma ọ bụrụ na price nke a òkè esịmde a dị ala nke $ 35 on Monday na-emepe na $ 30 on Tuesday, ya bụ a $ 5 n'ala price ọdịiche, mma maka obere ahịa ndị na ẹkenịmde ọkwá ha n'otu ntabi anya, ma dị ize ndụ n'ihi na ogologo ahịa. Ndị a gaps ke price nwere ike ịbụ mfịna maka ịkpa nkata onye oru analysis n'ihi na ihe niile na-egosi na oscillators ghọọ skewed on a gaps.
Ogologo / Short mgbanwe: ike irite uru Ma ehi na agba Markets
Ụfọdụ ndị ahịa, karịsịa ndị na-ere ahịa nanị, na-eche na ha nwere ike ịme ego mgbe ahịa na-arị elu. Na ahịa FOREX ị nwere ohere ịme ego mgbe ahịa ahụ gbagoro ma ọ bụ ala. Mgbe ị na-eche ahịa na-aga elu, ị na-aga ogologo (ịzụta) na mgbe ị na-eche ahịa na-agbada, ị na-agba ọsọ (ere). Enweela ụfọdụ ndị ahịa na-akwado ahịa mgbe nile, na ndị ahịa ndị ọzọ na-atụ anya na ahịa ga-agbadata. Ọ kacha mma ka ị nwee ike ịzụ ahịa ma ọ bụ ụzọ ọ bụ na nke ahụ bụ ahịa ahịa, nke na-enyekwu ohere. A na-agụ ego ị na-eme ma ọ bụ funahụ otu ụzọ ahụ. Ọ bụ ọdịiche dị n'etiti ihe ị kwụrụ na ihe ị rere ego maka. Ma ị na-ere mbụ ma zụta mgbe e mesịrị, ma ọ bụ na-eme ya n'ụzọ ọzọ, adịghị mkpa.
Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ego na ike ga-traded, e nwere fọrọ nke nta mgbe ụfọdụ obodo Nkea. Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ozi ọma dị mma ka ọ dị njọ n'ihi na anyị nwere ike, ma ga-,-enwe ike ahia ha abua. Idei mmiri, oké unwu, oké ọkọchị, agha, mgbanwe ọchịchị na nke ire ure, nakwa dị ka aku na uba na-arụ ọrụ, ma ọ bụ enweghị, mmasị ọnụego, onu oriri, na deflation niile-enwe mmetụta na uru a kpaara nke abụọ ego. E nwere ike iche nke echiche dị nnọọ ihe mmetụta n'elu ego pụrụ ịbụ, ma a ga-enwe mgbe nile ụfọdụ volatility.
Ọ dịkwa ike na ego, ma na ụfọdụ Broka na-ekwe ka ọ na-, ahia ogologo na obere otu akwụkwọ ego n'otu oge, a na-akpọ hedging. Hedging ike nwere ike inwe a di na nwunye nke uru, onye ọzọ pụrụ iche karịa ndị ọzọ. One doro anya uru bụ na ọ nwere ike na-ekwe ka ndị ahịa ikpebi ma ọ ga-emechi a ahia ma ọ bụ dechapụ ahia iji belata ihe ize ndụ. Otú ọ dị, nke a na-aghọ obere uru mgbe ị na-atụle na ma ị na-emechi a ahia ma ọ bụ dechapụ ya na onye ọzọ nke na-abụghị direction, uru na ọnwụ bụ kpọmkwem otu, na ị na-akwụ okpukpu abụọ nke ihe-agbasa n'ihi na i mere ka abụọ trades. A ọzọ na-akpali uru nke hedging bụ na ị nwere ike igwu ọtụtụ atụmatụ dị iche iche na otu akaụntụ, na otu akwụkwọ ego, na n'ihi na mgbe ụfọdụ gị otu atụmatụ pụrụ ịbụ ogologo mgbe nke abụọ anabata ndị a dị mkpirikpi, ị na-achọghị ka a amanye nso gị ogologo atụmatụ ọnọdụ mgbe ọ bụghị ma dechara ya kpaa kụrụ ọnụ, ọ bụghịkwa na ị chọrọ igbochi nke abụọ ịba ya ọnọdụ. Ị chọrọ ekwe ma ndị ogologo ma obere ọkwá ịbanye na wepuÚ ha setups na ha onwe ha okwu, na-enweghị n'èzí mgbochi si n'aka mgbochi hedging iwu. Ọzọkwa, ụfọdụ azum ma ọ bụ EAs adabere na ike na-oke ma ọ bụ na-ezughị ezu oke dị ka otu akụkụ nke ịga nke ọma ha na profitability, na otú a ozu ahia -achọ ka ha na-arụ ọrụ ndị dị otú ahụ EAs kwesịrị ịchọ a ore na hedging ike.
Forex Short-ere Advantage
Na Forex ọ bụ dị nnọọ ka mfe-ewe a obere ọkwá ya dị ka ọ bụ na-a ogologo otu. Ebe ọ bụ na ego na-traded abụọ abụọ, ọ bụla ego a na-ọnụ na okwu nke ọzọ, obere n'ire on a ego ụzọ bụ yiri ka aga ogologo na ebuka.
Ma n'ahịa ahịa, e nwere mmachibido iwu ịkụre obere. Na United States, a tụrụ ndị na-ere ere obere maka maka Wall Street okuku nke 1929 na otú ọchịchị ụkpụrụ ha iwu ka tie iwu megide obere ere ákwà si ere mbak n'oge a downtick, nke e mara dị ka uptick na-achị (nke na-egbochi ahịa si shorting a ngwaahịa ma ọ bụrụ na ozugbo bu ụzọ ahia hà ma ọ bụ ala karịa price nke obere ire ere ). Na-achị bụ a pụrụ isi kwuo si 1938 ruo July 3, 2007, mgbe ọ wepụrụ site na sec (sec ntọhapụ Ee e 34-55970). Na nso nso a, na Sept 2008, obere n'ire ihe dị ka ihe so akpata ya ndị ahịa ọdịda, ọ nọ na iwu site sec n'ihi na 799 ego ụlọ ọrụ ruo izu atọ ná mgbalị ime ka iku ndị ụlọ ọrụ. Ọbụna na-enweghị ọchịchị usoro iwu mgbochi, ọ bụghị ihe niile ebuka dị ka a shorted, na ore nwere na-agwa gị ndị na-, na ọbụna mgbe ahụ, ọ bụghị ihe niile investors nwere ihe-njikọ eligibility gbaziri ha ore ka mkpụmkpụ a ngwaahịa.
N'ọtọsị, ọ dịkwa mkpa iburu n'obi na-ere obere ebu ihe ize ndụ karịa erekwa ogologo. Na-aga ogologo, losses na-ejedebeghị (price nwere ike na-agbada efu), ma uru na-akparaghị ókè; na-adịghị ere, na a na-nwesịrị, o kwere omume inweta uru na-ejedebeghị (na ngwaahịa nwere ike na-agbada a price nke zero), na na-ere ere nwere ike ida ihe karịrị mbụ uru nke òkè, n'ihi na ọ dịghị elu ịgba. Short ere ákwà ga--maara nke na e nwere ike a obere piakota.
Low Azụmahịa Akwụ ụgwọ
Mgbe ị na-ere ahịa FOREX, ọnụahịa ndị dị ntakịrị. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa anaghị anara ọrụ, mana, buru obosara (nke a na-akpọ "gbasaa") n'agbata ego ahụ ma rịọ ego, nke nwere ike ịbụ obere obere ego abụọ, site na 2-5 pips. Mgbe ha na-agba ụgwọ ọrụ, dị ka ihe ECN ore, na ozu ahia mgbe na-enweta mkpokọta ala azụmahịa na-eri n'ihi na nke ukwuu belata mgbasa.
Ebuka na futures, n'ụzọ dị iche, na-ana ọrụ na bụla ahia, na Ugboro trading pụrụ ịghọ nnọọ oké ọnụ. Discount online Broka banyeworo na nke mbubreyo competitively belata Ụlọrụ na-enweghị atụ nke ụzọ ikwu na mgbe anọ na-efe Broka (odori ka ala dị ka $ 4 kwa ngwaahịa ahia kama $ 20, ihe atụ), ma, ọbụna ha nnọọ ala Ụlọrụ ike mpi na asọmpi mgbasa / ọrụ ịnye ọnụahịa nke Forex Broka.
Na-akpali mmasị ezu, n'ihi na azụmahịa eri nke Forex bụ pro rata ka ọtụtụ size eji, ọ bụkwa ihe ngosi na-agbanwe agbanwe. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị traded 1 Micro otutu GBPUSD na mgbasa nke 4 pips, ụgwọ azụmahịa gị ga-abụ naanị 40 cents (4 pips X 0.10 cents). Ọ bụ ya. Ihe ọ bụla gbasara ebuka ma ọ bụ ọdịnihu, ọbụna na obere azụmahịa, ga-abụ nke kacha nta na 100 ugboro (min $ 4), mgbe ahụ ị ga - enwetakwa ego ahụ "dị mma" na nkwụsịtụ nke ụlọ ọrụ weebụ.
Low Opekempe Account mmepe
Nnukwu uru nke Forex bụ na ịchọghị nnukwu ego maka ịmalite azụmahịa. Imirikiti ndị na-ere ahịa ga-enye gị ohere ịmepe akaụntụ ma malite azụmahịa na erughị $ 500 USD, na ọtụtụ na-enye ohere maka obere $ 50.00. N'ụzọ dị otú a, akararịrị dabara nke ọma maka ndị pere mpe ozu ahia.
Tụlee nke a ala capitalization chọrọ ka virtual mfep onye kwesịrị ahia ebuka ma ọ bụ futures. Ha na-ekwe gị emeghe akaụntụ na dị ka ala dị ka $ 2000, ma n'ihi ndị ofu ọnọdụ sizing na emeghị mgbanwe leverage nhọrọ, ị ga-ewere on a nnọọ ukwuu n'ihe ize ndụ trading na nke a kacha nta na akaụntụ size. Odi mfe ahia na ukwuu karịa $ 10,000 na ebuka ma ọ bụ $ 100,000 na futures, dị ka anyị ga-ahụ n'okpuru ebe a.
Mgbanwe leverage kwa, Lot Nha
Ma ebuka na futures ahịa achọ butụrụ ibu mbụ ego na n'enweghị ahia ha, nyere ha ofu leverage na ọtụtụ sizing.
N'ọtọsị ahịa, n'ihi na ọtụtụ Broka naanị ekwe ka ị na-azụ blocks nke 100 mbak, ị ga-mkpa a nnukwu mbụ na akaụntụ size na n'enweghị ahia ebuka na-ọnụ na $ 25 ma ọ bụ karịa. Dị ka ihe atụ, ebe ọ bụ na ọtụtụ Broka inye ohere nanị otu ịzụta blocks nke 100 mbak, ma ọ bụrụ na ị zụrụ 100 mbak nke ABC Company for $ 50 kwa òkè, na ị ga-mkpa $ 5000 ($ 50X100) ahia na ụlọ ọrụ. Na 1: 1 leverage (na-enweghị agbaziri), ọ bụla dobe ke ngwaahịa si price site 10 dollar ga-anọchi anya onye na ọnwụ nke 20% gị ọnọdụ ($ 10X100 = $ 1000). Na ọ bụrụ na ị gbaziri on oke, na 2: 1 leverage, idi $ 2500 iji ịzụta na ngwaahịa, mgbe ahụ, ọ bụrụ na ngwaahịa dara 10 dollar site na $ 50 ka $ 40, ị ga-enwekwaghị $ 1000 gị $ 2500 mbụ ( nke ga-anọchi anya a 40% ọnwụ), na a n'ihu dobe na price ga-n'ihe ize ndụ na-a oke ịkpọ site na ore na-etinye ihe ala ma ọ bụ ego n'ime akaụntụ iji weghachi 50 percent itule.
N'ahịa ahịa ndị a na-ere n'ọdịnihu, ọnụọgụ dị nnọọ elu karịa ebuka, na n'ihi na a na-edozikwa otutu ma ọ bụ nkwekọrịta, ihe a dị ukwuu na-eme ka ihe ize ndụ ahụ pụta ìhè ma si otú ahụ na-achọ ọtụtụ nnukwu akaụntụ iji zere ya n'enweghị ihe ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, otu nkwekọrịta gold (nke $ 4000) na-achịkwa 100 troy ounces; Ya mere, ọ bụrụ na ọlaedo na-ere ahịa na $ 1200 / ounce, uru nke nkwekọrịta ahụ bụ $ 120,000 ($ 1200 X 100 ounces), nke na-eme ya 30: 1 leverage. N'okwu ihe, 1 point = $ 100. Maka nkwekọrịta ahụ na-adabere na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu ma na-aba uru, ị na-ejidesi ihe ike dị egwu ma dị egwu. Ị ga-achọ otu akaụntụ ọtụtụ oge buru ibu karịa oke gị ka i nwee ike idigide nchịkọta izu ụka nke 100 (ihe 100 X $ 100 = $ 10,000). Ọ bụrụ na ọlaedo gbanwere ọnọdụ gị, a ga-ewepụ $ 10,000 gị na ụbọchị ole na ole. Ọ bụrụ na ọdịnihu ozu ahia chọrọ ahia na obere ego na n'ihe ize ndụ, ya nanị nhọrọ ga-ahia ọla-edo Obere nkwekọrịta (33.2 ounces kama 100; 1 mgbe = $ 33) na e-CBOT mgbanwe, nke ga-ebelata ya leverage na n'ihe ize ndụ site a nke atọ Otú a 100 mgbe aga megide ọkwá ya ka ga na-anọchi anya a Ọnụ ọgụgụ butụrụ ibu $ 3000 mebiri. Futures ahịa nke Obere gold contracts kwesịrị karịrị $ 50,000 na-enwe ike idi ihe a usoro nke adịkwa trades.
Ebe ọ bụ na a na-emegharị ihe dị mma ma na-agbanwe agbanwe, a pụrụ imeghe Forex na obere obere ego isi ego ya ma jiri obere obere nha azụ ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere naanị $ 1000 iji tinye ego, ị ga-emeghe akaụntụ nchịkwa micro na 200: 1 leverage, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịzụ 200 ugboro ugboro isi obodo gị, ma ọ bụ 2 nhazi (1 standard lot = $ 100,000; 2 ihe nchịkwa = $ 200,000), ihe kachasị mma ị ga-eme bụ iji zụọ ọtụtụ nza nha, 1 micro lot (0.01 = $ 1000), nke ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eji ihe arụ ọrụ. Ee, ihe ntanye efu. Ihe kpatara nke a bụ na ego ndị a na-emekarị ka 100 pips ma ọ bụ karịa, na onye ọ bụla nwere ike iji nsị 100 pip mee ihe megide ọnọdụ gị site n'itinyela uru nke pip site na nha. N'ihi na 1 pip na-eji nhazi ọkọlọtọ dịka $ 10, mgbe ahụ, 100 pip ga-anọchi anya nkwụsị $ 1000 (ehichapu akaụntụ gị ọ bụrụ na ị dara ogbi iji mee ihe dị otú a!). Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eji ntinye 0.01 (1 pip na-eji ihe nkwụnye ego na-akwụ ụgwọ $ 0.10), ọnyà 100 pip ga-anọchi anya naanị $ 10 (naanị ọkọlọtọ, obere 1% ọnwụ nke akaụntụ gị). N'ọdịiche a, ị ga-enwe ike iguzogide ụdị ahịa ahịa na-efu ma ka nọ na egwuregwu ahụ, n'adịghị ka ahịa ahịa n'ọdịnihu ebe akaụntụ gị ga-agbaworị. Ihe ngosi nke 400: 1 nwere ike idowe ya na nchekwa ma ọ bụ mberede, dịka anyị ga-atụle na ngalaba ndị ọzọ.
FX Uru Na nchikota
Forex-enye gị ohere igbu ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi (n'ime a tremendously mmiri mmiri gburugburu ebe obibi), ahia 24 awa ogologo na obere ntụziaka na ala-agbasa na / ma ọ Ụlọrụ, ndị nwere ike iji nnọọ mma ma na-agbanwe amalite ichekwa, ọtụtụ nha na leverage. Ebuka na futures, n'ụzọ dị iche, ka nnọọ ole na trading window na okwu nke trading awa na direction, nnọọ ihe, ohere nke egbu egbu oge, slippage na price mkpachapụ, trades nwere ike ịdị ọnụ na okwu nke Ụlọrụ, na ndị ọzọ ize ndụ na okwu nke ha ofu amalite ichekwa, ọtụtụ nha na leverage.
Uru Ngwongwo 24 Hour Global Trading
Mgbanwe leverage na Lot Nha
Ibu Size & liquidity Advantage
Ogologo / Short mgbanwe: nwere ike irite uru ma ma ehi ma na-agba ahịa
Wall Street okuku